Banijya News | » प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुनाफा १० करोड नाघ्यो प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुनाफा १० करोड नाघ्यो – Banijya News
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुनाफा १० करोड नाघ्यो
२२ मंसिर, २०७६, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. १० करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले सो अवधिमा रू. ६ करोड ८० लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब छ भने जगेडा कोषमा रू. १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ । जीवन बीमा कोषमा रू. ९ अर्ब ५१ करोड जम्मा भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७६ करोड ५६ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
कुल जारी बीमालेखको संख्या ३ लाख ६० हजार ५९८ छ । कम्पनीले पहिलो त्रैमाससम्ममा ६५४ जनालाई रू. १५ करोड २ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ३४ जनालाई रू. ९८ लाख ६४ हजार दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १९ दशमलव ९७, मूल्य आम्दानी अनुपात १६ दशमलव १२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५८ छ ।
बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ३२७ कायम भएको छ । कम्पनीको ५५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिन छोटो टुप्पी र पुच्छर भएको सेतो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले आगामी दिशा स्पष्ट संकेत नगरे पनि शेयरमूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ५८ दशमलव ६२ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलन रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ७ दशमलव ७३ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम र प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखालाई १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा नजिकिन खोजेका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखालाई काटेर सो भन्दा माथि छ । बिहीवारकोे शेयरमूल्य रू. ३२७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा , सस्तिएमा रू. ३०५ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।